Vokatra - Shanghai Mingke Process Systems Co., Ltd.
Ny karazana rafitra fanaraha-maso fehin-kibo vy
Mingke dia afaka manome rafitra fanaraha-maso fehin-kibo efatra karazana ho an'ny indostria samihafa.
Ankoatra ny fehikibo vy, Mingke dia mamatsy Stainless Steel Belt Conveyor.Steel Belt Conveyor novokarin'i Mingke izay misy fitaovana Mingke Products.Toy ny fehin-kibo vy matanjaka, rafitra fanaraha-maso fehikibo vy, tady fingotra v.
Tamin'ny taona 2016, nahomby i Mingke ny voalohany Static Isobaric Double Belt Press (DBP), ary tamin'ny taona 2020 dia niakatra ho 400 ℃ ny mari-pana fanamainana ny gazety.
Manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana sy famatsiana fehikibo vy matanjaka sy rafitra fizotry ny fehikibo izahay.
MT1650 Martensitic Stainless vy fehikibo
MT1650 dia fehikibo vy tsy misy vy martensitic manamafy ny rotsak'orana ambany, izay azo tsaboina amin'ny hafanana mba hanatsarana ny tanjaka sy ny hamafin'ny.Azo amboarina bebe kokoa amin'ny fehikibo vita amin'ny sakafo hariva fitaratra sy fehikibo vita amin'ny texture.
MT1500 Martensitic Stainless vy fehikibo
MT1500 dia fehin-kibo vy tsy misy vy martensitic manamafy ny rotsak'orana ambany, izay azo tsaboina amin'ny hafanana mba hanatsarana ny tanjaka sy ny hamafin'ny.
Fehikibo vy tsara ho an'ny indostria avo lenta
Precision fehikibo, toy ny vokatra avo lenta amin'ny tarika vy rehetra, dia manana tombony amin'ny tanjaka tsara, avo lenta ary madio.
Serivisy fanamboarana ny fehikibo vy
Ao amin'ny indostrian'ny tontonana vita amin'ny hazo, indostrian'ny simika, indostrian'ny sakafo sy indostria hafa, fehikibo vy dia simba taorian'ny fandidiana tsy tapaka nandritra ny taona maro ary nisy fiantraikany tamin'ny famokarana ara-dalàna ary mila soloina.